राजपा नेपालले किन चाहदैन फोरम नेपालसँग एकीकरण ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » राजपा नेपालले किन चाहदैन फोरम नेपालसँग एकीकरण ?
राजपा नेपालले किन चाहदैन फोरम नेपालसँग एकीकरण ?
पुस १५ गते संघीय समाजवादी फोरम नेपाल निकट संघीय प्रेस फोरम पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मोलनमा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, ‘राजपा नेपालमा रहेका ६ जना अध्यक्षको कुरामा एकरुपता छैन । छजना नेताहरुकै बीचमा खुट्टा तानतान छन् अनि कसरी हुन्छ एकीकरण ।’
यता, राजपा नेपालका नेताहरुले भन्न थाल्नुभएको छ, ‘फोरम नेपाल सरकारमा रहेसम्म सो दलसँग न वार्ता हुन्छ न एकीकरण हुन्छ ।’ फोरम नेपालसँग न विचार मिल्छ न सिद्धान्त मिल्छ, त्यसैले यथास्थितिमा एककिरण सम्भाव छैन भन्दै आइरहनु भएको छ ।
यी दुई दलका शीर्ष नेताहरुको कुरा सुन्दा एकीकरण धेरै टाढाको विषय बनेको छ । यद्यपी सबभन्दा फोरम नेपालले वार्ताका लागि वार्ता समिति गठन गरेको छ । यसलाई उपलब्धी नै मान्नुपर्छ तर हालसम्म किन कुनै प्रगति भएको छैन त । फोरम नेपाल र राजपा नेपालबीचको एकता सञ्चारमाध्यममा सिमित भएको जस्तो देखिएको छ ।
एकताका लागि फोरम नेपालले वार्ता समिति गठन गरेपनि त्यसका औपचारिक जानकारी राजपा नेपाललाई गराएको छैन, नत कहिले वार्ताका लागि बोलाएको छ । उतातिर औपचारिक चिठी वा जानकारी नपाइकन राजपा नेपालका नेताहरुल भटाभट प्रतिकृया दिन थाल्नुभएको छ ।
राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलको बैठक पुस ११ गते बसेको थियो । तर, त्यो बैठकमा फोरम नेपालले गठन गरेको वार्ता समितिको बारेमा मौन देखिएको छ । मंसिर २२ गते बसेको फोरम नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय वार्ता समिति गठन भएको थियो ।
फोरम नेपालले वार्ता समिति गठन गरेपछि राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलको बैठक पहिलो थियो । बैठकमा फोरम नेपालसँग एकीकरणको बारेमा केही छलफल होला भनि धेरैको अपेक्षा थियो । तर त्यसको बारेमा कुनै चर्चा समेत भएन । यद्यपी, अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले फोरम नेपाल सरकारबाट फिर्ता नभएसम्म कुनै प्रकारको वार्ता नहुने धारणा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ ।
अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादवको पनि त्यस्तै त्यस्तै धारणा सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भएको छ । तर फोरम नेपाल अझै पनि राजपा नेपालसँग एकीकरण हुनेमा आशावादी छ । यद्यपी राजपा नेपालको तर्फबाट सकारात्मक धारणा आउनुपर्छ । अध्यमण्डलमा रहनु भएका छजना नेताको एउटै भ्वाइस आओस् भन्ने चाहना फोरम नेपालको रहेको छ ।
वार्ता समितिमा समेत रहनुभएका फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले भन्नुभयो, राजपा नेपालसँग एकीकरण हुनेमा हामी आशावादी छौं, ढिलो चाँडो एकीकरण हुन्छ ।’ राजपा नेपालसँग हालसम्म कुनै औपचारिक वार्ता शुरु नभएको बताउँदै उहाँले सो दलका दोस्रो तहका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफलहरु भइरहेको बताउनुभयो ।
मधेशको अधिकार र पहिचानका लागि यी दुई दल मिल्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै महासचिव यादवले मुद्दा, विचार, एजेण्डा मिल्ने जोसँग पनि फोरम नेपालको एकीकरण हुने बताउनुभयो । राजपा नेपालसँग मात्र होइन, अन्य साना दलसँग पनि एकीकरणका लागि कुराकानी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका सदस्य शरतसिंह भण्डारीले बैठकमा पार्टी एकीकरणको एजेण्डा थिएन, छोटो समयका लागि बैठक बसेको थियो, यी विषयमा कुनै चर्चा नै नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, फोरमले पार्टी एकीकरणका लागि वार्ता समिति गठन गरेको छ त्यसको कुनै औपचारिक जानकारी हाम्रो पार्टीमा आएको छैन, आएको भए सायद हामीले त्यसमा छलफल गथ्र्यौं ।’
फोरम नेपाल सरकारभित्र र राजपा नेपाल सरकार बाहिर रहेको हुनाले वार्ता हुन नसक्ने बताउँदै नेता भण्डारीले भन्नुभयो, एकीकरणका लागि टेक्नीकल समस्या छ उनीहरु सरकारमा छन्, हामी सरकार बाहिर छौ, त्यसले गर्दा वार्ताका लागि समस्या हुनसक्छ ।’
अर्को कुरा फोरम नेपाल पनि विभिन्न दल मिलेर बनेको नयाँ पार्टी हो र राजपा नेपाल पनि विभिन्न छवटा पार्टी मिलेर बनेको नयाँ पार्टी हो । दुवै नयाँ पार्टी भएका हुनाले एकीकरणमा समस्या हुनसक्ने उहाँको धारणा छ ।
दुवै पार्टीले आआफ्नो पार्टीको एकता महाधिवेशन तय गरेको छ । दुवैको महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि एकीकरणको लागि प्रयास भयो भने त्यो सजिलो हुने भण्डारीको तर्क छ ।
अहिले राजपा नेपालमा छजना अध्यक्ष छन्, सांगठनिक संरचना तलदेखि माथिसम्म मिलेको छैन, महाधिवेशन भएपछि मात्र यी सबै कुरामा मिल्छ । त्यस्तै फोरमको पनि छ, भण्डारीले भन्नुभयो, ‘फोरम नेपाल एकल नेतृत्वबाट चलेपनि सांगठनिक संरचना पूर्ण मिलेको छैन । उसको पनि महाधिवेशन भएपछि मात्र सबै कुरा मिल्छ । दुवै दलले बैशाखमा महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरिसकेको छ ।’
सरकारलाई राजपा नेपालले समर्थन दिएपनि सरकारमा सहभागी नभएको बताउँदै भण्डारीले राजपा नेपाल जुनसुकै बेला पनि समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा पुगेको छ, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ त्यो अवधिमा सविधान संशोधन भएन भने समर्थन फिर्ता हुनसक्ने दावी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, हामीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै फोरम नेपाल पनि सरकारबाट बाहिरियो भने वार्ताका लागि एउटा वतावरण तयार हुनसक्छ ।’ सोही दलका अध्यक्षमण्डलका अर्का सदस्य महेन्द्र राय यादव भन्नुहुन्छ, एकता, एकीकरण, मोर्चा पहिचानका लागि आवश्यक छ ।
यसबाट कोही भाग्न मिल्दैन तर यसका लागि दुवै दलले वतावरण तयार गर्नुपर्छ ।’ आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशीहरु एक आपसमा नमिलेसम्म पहिचानको लडाई जित्न नसक्ने बताउँदै नेता यादवले यसका लागि छलफल र वार्तालाई आगडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
भारत पनि चाहन्छ, यी दुई दलको बीचमा एकीकरण होस् । यसको बारेमा विभिन्न स्तरमा कुराकानी पनि भइरहेको छ । अब पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा दुवै दल एकीकृत भएर भाग लिने तयारी भइरहेको छ । अघिल्लो चुनावमा गठबन्धन बनाएर लड्दा दुवै पार्टीलाई राम्रै फाइदा भएको छ । त्यसैले पनि अब एकीकरण नै गर्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।
तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लगाउँदा थुप्रै पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट बन्चित भएका छन् । सरकारले अब पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लगाउने तयारी गरिरहेको छ । यसको बारेमा बहस शुरु भएको छ । यदि पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लाग्यो भने फोरम र राजपा पनि राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा आउन सक्दैन । त्यसले गर्दा यी दुई दललाई एकीकरणका लागि बाध्य पारेको राजपा नेपालका एक नेताले बताउनुभयो ।
यो पाँच वर्षको भित्रमा यी दुई दलबीच एकीकरण हुने ठोकुवा गर्ने र एकीकरण हुनै सक्दैन ठोकुवा गर्ने नेताहरु पनि छन्, यी दुवै दलमा । खासगरि दोस्रो तहका नेताहरु एकीकरणका लागि नेतृत्वमाथि दवाव बढाई रहेका छन् । उहाँहरु एक आपसमा दिनदिनै छलफल गरिरहनु भएको छ र एकीकरणका लागि नेतृत्वलाई दवाव दिइरहनु भएको छ । तर एकीकरण नचाहने व्यक्ति दुवै दलमा रहेका हुनाले वतावरण बन्न नसकिरहेको राजपा नेपालका एकजना महासचिवले बताउनुभयो ।